खाडीको दशैं |
By: एल. बि. शाही
On: २०७६ आश्विन २१ गते, मंगलवार, ०७:०० बजे प्रकाशित
गगनले म बसेको धर्तीलाई अनुग्रह ( कृपा ) नगरेको भएर होला वर्षा ऋतुको कुनै अनुभव नगरेको धेरै भयो। झरीले चुटेको नभएर होला, धानको बालाहरूको त्यो यौवन देख्न नपाएर होला आफूलाई त बडा दशैं आएको कुनै विशेष अनुभूति हुन सकेको छैन। खास गरेर त्यो व्याख्या गर्न नसकिने अनौठो खुशीको। दशैं पर्व मात्र नभएर ऋतुहरूको सबै भन्दा उत्कृष्ट उपहार हो जस्तो पनि लाग्छ । सबैको लागि दशैं हरेक वर्ष आउछ तर पराई देशमा बस्ने नेपालीको लागि दशैं हरेक दुई वर्ष या त्यो भन्दा पनि अलि धेरै अवधि पछि मात्र आउँछ। यहाँ मिठो अनुभूति गर्न सकिने दशैं को कुरा हुदैछ। मानिसहरूको समय, अवस्था र परिस्थिति अनुसार दशैँले फरक फरक खालको अनुभूति पस्कन सक्छ। बच्चाहरूलाई दशैंले एक प्रकारको खुशी दिन सक्छ भने जिम्मेवारी बोकेका बयस्कहरूलाई अर्कै किसिमको खुशी हुन सक्छ। आफ्नो घरमा मनाएको दशैंको खुशीको बखान गर्न अलि कति समय लाग्न सक्छ भने, घर बाहिर त्यो पनि धेरै टाढा हुँदा मनाइने दशैंको खुशी खोज्न बहाना रोज्नु पर्छ।
दशैं पर्व मात्र नभएर ऋतुहरूको सबै भन्दा उत्कृष्ट उपहार हो जस्तो पनि लाग्छ । सबैको लागि दशैं हरेक वर्ष आउछ तर पराई देशमा बस्ने नेपालीको लागि दशैं हरेक दुई वर्ष या त्यो भन्दा पनि अलि धेरै अवधि पछि मात्र आउँछ।
वैदेशिक रोजगार खास गरेर खाडी मुलुकमा बसेका युवाहरूको लागी बडा दशैं त सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित हुने होला । अलि धेरै भनेको विगतको दशैंसँगै जोडिएका सुखद स्मृतिहरूमा डुबुल्की लगाउने काम । खसी बोकाको काटेर, नाचगान गरेर र सेल रोटी खाएर मात्र दशैं हुने भए त विदेशमा सबैजनाले त्यो व्यवस्था पनि सजिलै गरेको देख्न पाइन्छ। टिका लगाउनको लागी हो भने पनि आफ्नो गाउँ घर अनि वरपरका मान्यजन र दाजु भाइको जमर्को पनि सजिलै भएको हुन्छ। तर दशैंको महत्व र परिभाषा अलि विशेष र फराकिलो हुनुपर्छ। दशैं त हाम्रो परम्पराको को प्रतिविम्ब र संस्कृतिको महानता झल्काउने उत्सव हो जसले शरद ऋतुलाई पनि अलंकृत गर्ने काम गरेको हुन्छ। अभूतपूर्व आख्यान (mythology) बोकेको यो पर्वले हाम्रो संस्कृतिमा विभित्रता र प्रचुरता ल्याउँछ। एकता, घनिष्टता, सांमजस्यता,आदर र प्रेम आदि यो पर्वका मूल विशेषताहरू हुन्। यसले रिसाएर बसेका छिमेकीलाई वार्तामा ल्याउने काम गर्छ र कहिल्यै नमेटिने पैसाको चाहत लिएर टाढिएका आफन्तहरूलाई एक ठाउँमा भेला गर्छ। भर्खर भर्खर बन्न लागेका सम्बन्धहरूमा मिठासपन ल्याउँछ। यती बेलाको समयमा प्रकृति पनि निकै सुरुचिपूर्ण देखिन्छ, नदिहरु आफ्नै पुरानै कन्चन स्वरूपमा फर्किसकेका हुन्छन। सुर्यको किरणहरु पनि विस्तारै प्यारो र न्यानो लाग्न थाल्छन। पशुपंक्षीहरु पनि उत्तेजित देखिन्छन। यस्तै यस्तै कारणहरुले गर्दा होला दशैं बिशिस्ट र महान पर्व भएको।
विदेशमा युवाहरुले मनाउने दशैं मोबाइलमा खेलिने भर्चुअल गेम जस्तै हो हल्का रमाइलो होला तर वास्तविक खुशी र उल्लासमय वातावरण पाउन सकिदैन ।
यसरी खाडीमा रहेका युवाहरुलाइ यस्तो महान पर्वबाट वन्चित भइ पिडावोध हुनु स्वाभाविक नै हो। र नैराश्यको भुमिमा रुमलिनु त जरुरी जस्तै हुन जान्छ । विदेशमा युवाहरुले मनाउने दशैं मोबाइलमा खेलिने भर्चुअल गेम जस्तै हो हल्का रमाइलो होला तर वास्तविक खुशी र उल्लासमय वातावरण पाउन सकिदैन । यसले उदासीनता,व्यग्रता र विवशता निम्त्याउने काम गर्छ। तपाइको प्रतिलिपि स्वरुप बोकेकाहरुले (रगतको नाता भएका) तपाइलाई घर आउन जिद्दी गर्दा मन खिन्न पक्कै हुन्छ। तपाइको जीवनको यात्रा मन पराएर आएकी सहयात्रीको आँशुले तपाइलाई भावुक अवश्य बनाउछ। दौतरीहरुले यो दशैंमा त भेट्नु पर्छ है भन्दा जवाफमा तपाइको आवाजको मात्रा निश्चित रुपमा कम हुदै जान्छ। विकासको उच्चस्तरमा रहेका र रंगी बिरिंगी अनेक थरिका रचानामा बनेका घरहरु रहेका आधुनिक शहरलाई पनि तपाइलाई फकाउन गाह्रो भैरहेको हुन्छ। किनकि तपाई यति वेला दशैंको मनोदशामा आइसक्नु भयो । तपाइको स्मृतिमा अतितको दशैंले दिएको अविष्मरणीय पलहरुले कब्जा गरिसकेका छन्। अनि छटपटी र असहजता निनिर्विकल्प जस्तै हुन थाल्छन। त्यसैले कुनै महान व्यक्तिले भनेका थिए “ खुशी कुनै भाहिरी तत्व या अवस्थाले निर्धारण गर्दैन“ ।
जस्ती सुकै पिडा भएपनि यो अवस्थाको अर्को पाटोलाइ हेर्नु ज्यादा सकरात्मक र बुद्दिमानी होला। ती पीडाहरुलाइ नियतीको खाल्डोमा पुरेर सुन्दर भविष्यको सुघंधित कल्पनामा रमाउदा वेश होला। वास्तवमा तपाईहरुले गर्व गर्नु पर्ने हुन्छ तपाइको पसिनाले समाज र देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान अर्थ बुझ्ने सबै जनालाई राम्रो सग थाहा छ। तपाइको त्यागले जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रंग भर्दैछ। देशमा नियन्त्रण बाहिर रहेको महंगीको सामना गर्न तपाइको परिवार सक्षम भएको छ। जसको आवाज सुन्दा तपाई उर्जावान भएको महसुस गर्नु हुन्छ उनीहरु प्रतिप्रस्धात्मक शिक्षा लिन पाइरहेका छन। केहि विकृतिहरु अवश्य आए होलान, देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान भ्रष्टाचारीको मोज बनेको होला।कतिजनाले प्रिय मान्छे गुमाएको पनि होलान। त्यसको लागी दुख त अवश्य हुन्छ तर त्यति धेरै चिन्ता गर्नु बेतुका मात्र हुन्छ। यसको भरपाई प्रकृतिले कर्मको नियम भित्र रहेर आफ्नै तरिकाले हिसाबकिताब गर्ने छ। प्रिय मान्छेहरुबाट टाढा भइ समुन्द्रपारी बस्दा आउने यादहरुमा तड्पिनु भन्दा पनि कुत्कुताउनुको अनुभव गर्दै रमाउनुहोस। तपाइलाई थाहा छ समुन्द्रले जमिनलाई अलग गर्न सक्छ तर तपाई र तपाइको प्रियजनको बिचको आत्मीयतालाई कदापी अलग गर्न सक्दैन । त्यसै पनि अन्तमा दुरी को होइन तपाइको प्रेम र अनुरागको मापन हुन्छ। तपाइको अर्धांगिनी निकै आशाबादी देखिन्छिन। भविष्यसंग वाचा गर्दै वर्तमानलाइ फकाउदै छिन ताकि सकेसम्म छिट्टै सगै बस्न पाइयोस। तपाइको पुजनीय बुवा आमाको आशिर्बाद्को लागी दशैं नै पर्खनु पर्छ भन्ने छैन। वहाँको हरेक सासमा तपाइको खुशी, सफलता र सुस्वास्थ्यको कामना मात्रै होइन तिब्र इत्क्षा पनि छ। अनी आफन्त र साथीभाईहरुले तपाई विनाको दशैं मनाउने बानी बसाइसक्नु भएको छ तर बिर्सनु भने पक्कै भएको छैन। तपाइको निधारमा रातो टिका र जमरा नभएर के भयो? आफु भन्दा धेरै माया गर्ने तपाइको आफन्तको निधारको टिकाले पनि तपाइलाई उत्तिकै प्रफुलित गर्ने छ। यो दशैंमा सगै हुनु भएन त के भयो? जीवनमा अझै धेरै दशैहरु तपाइको भागमा बाँकी नै छन्। यसपालीको दशैं ले तपाइलाई हार नमान्न आग्रह गदै छ। तपाइको त्यागले धैर्यता माग्छ, धैर्यताको सम्बन्ध प्रक्रिया संग छ। त्यो प्रक्रियाले तपाइको प्रारब्ध निर्माण गरिरहेको छ।
आ-आफ्नै साना-ठुला आर्थिक सपनाहरु बोकेर पराइ भूमिमा संघर्षरत युवाहरूको जीवनमा विभिन्न देशका व्यक्तिहरु सग काम गरेको अद्भुत खुशी दिने अनुभवहरु बढ्दै जाउन, तपाइहरुको पसिनाले सुगन्ध दिन शुरु गरोस । तपाइले चाहेको सुखमय परिवार बनोस, तपाइले सोचेको सभ्य र भव्य समाज होस्। तपाइले कल्पना गरेको अथाह रोजगार भएको सम्पन्नशाली देश बनोस। बडा दशैंको धेरै धेरै शुभकामना!!!
२०७६ आश्विन २१ गते, मंगलवार, ०७:०० बजे प्रकाशित